War Deg Deg Ah :Qarax Xoogan oo Goordhaw ka dhacay agagaarka Xarunta Gobolka Banaadir – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
War Deg Deg Ah :Qarax Xoogan oo Goordhaw ka dhacay agagaarka Xarunta Gobolka Banaadir
MAREEG 11 April 2016 11 April 2016
Waxaa Daqiiqado yar kahor qarax aad u xoogan uu ka dhacay agagaarka Xarunta Maamulka Gobolka Banaadir Fisha Governo ee Degmada Xamar Weyne, waxaana qaraxan ka dhashay qasaaro isugu jirta dhimasho iyo dhaawac.
Qaraxa ayaa ahaa mid aad u xoogan oo laga maqlay qeybo badan oo kamid ah maaalada Muqdisho, waxaana warar horudhac ah aan helnay sheegayaan in qaraxa uu ahaa gaari Waxyaabaya qaraxa laga soo buuxiyya kaa oo ka dhacay dhabarka dambe ee xarunta Gobolka.
Goobjoogayaal ayaa ku waramaya in qaraxa uu ka dhacay afaafka hore Maqaayada Al-Hindi oo kutaala agagaarka Xarunta gobolka Banaadir, waxaana qaraxan ka dhashay qasaaro dhimasho iyo mid dhaawac oon tiradooda wali si rasmi ah loo ogeyn.
Gaadiidka Gurmadka deg dega ayaa kusii qul qulaya aaga Xarunta Gobolka Banaadir, waxaa sidoo kale halkaasi gaaray Ciidamo isugu jira Nabad Sugida Qaranka iyo booliiska kuwaa oo xiray wadooyinka gala xarunta Gobolka Banaadir.
Wali si dhab ah looma oga in qaraxa lagu bartilmaameedsaday xarunta Gobolka Banaadir iyo in qaraxa lala eeganayay Maqayaada Al-Hindi oo ku dhaw xarunta Gobolka Banaadir, mana jiro ilaa hada wax war ah oo kasoo baxay maamulka Gobolka.
Marka ay dalka ka Dhacayaan Doorashooyinka Gudoonka Baarlamaanka iyo Madaxweynaha oo la isku raacay
Ciidanka XDS iyo kuwa AMISOM oo si buuxda ula wareegay deegaanka BudBud ee G/Galgaduud “Sawirro”